Etu ị ga - esi tụọ atụmanya ụtụ aha Email ma merie!
Otu esi edozi olile anya email na mmeri!
Na Tọzdee, Septemba 29, 2009 Saturday, April 16, 2016 Scott Hardigree
Ndị debanyere aha email gị na ịpị na ebe nrụọrụ weebụ gị, ịtụ ngwaahịa gị, ma ọ bụ ịdenye aha maka ihe omume gị dị ka atụ anya ya? Mba? Kama, ha na-anabataghị, na-edebanye aha ma ọ bụ na-eme mkpesa? Ọ bụrụ otú ahụ, ikekwe ị naghị eme ka ihe ndị ị na-atụ anya ime ná ndụ.
Yabụ kedu otu esi ejikwa atụmanya dị elu nke ndị debanyere aha gị wee kpalie ha ime ihe?
Gwa onye debanyere aha gi KMERE ihe ị tụrụ anya ya nke ha.
Gwa onye debanyere aha gi KS what ihe ha pụrụ ịtụ anya ya nke gị.
Do Kpọmkwem ihe i kwuru na ị ga-eme.
Gwa mmadụ ihe ị ga - eme ma ọ bụ mee ka ha mee ihe, naanị site na ịjụ ha, ọ dị mfe ma doo anya kpamkpam, nri? Ma imirikiti ozi email na nkwukọrịta weebụ anaghị eme ya. Nke bu ihe kpatara otutu ndi ahia, n'agbanyeghị ngbasa ozi ndi emeputara nke oma, na ejedebe ihe na adighi nma na uzo ndi ozo.
Okwu a 'gwa ha' nwere ike ịda ụda ntakịrị nye ọtụtụ ndị ahịa. Emechakwa, ndị debanyere aha gị bụ ndị maara ihe ma ha ghọtara ngwaahịa gị yana ihe ị na-achọ ime. Mana ozugbo ị nwetara anya na ntụkwasị obi nke onye debanyere aha gị, wee gosipụta uru niile nke onyinye gị, ijide aka ka malitere. Lee ihe kpatara ya.
Ọ bụghị na ndị debanyere aha gị dara ogbi. Ha bụ gị, mama gị, na nwanne gị. Ma dị ka gị ha na-arụsi ọrụ ike. Enwere ọtụtụ ọrụ dị nso na-asọmpi maka uche ha. Nke bụ eziokwu bụ na ndị debanyere aha gị ngwa ngwa nwere ike ọ gaghị ama ihe ha ga-eme ọzọ, ihe ị ga-atụ anya ya, ma ọ bụdị onye ị bụ ma ọ bụ ihe ị chọrọ, belụsọ na ịkọwapụtara ya n'ụzọ doro anya. Ghaghi ịgwa onye debanyere aha ya ihe ị ga - eme, otu esi eme ya, na oge ị ga - eme ya. Nke a bụ otú.
Mgbe ịchọrọ ka onye debanyere aha gị mee ihe, ọ ga-agbakwunye adreesị ozi-e nzipu ozi na ndepụta ndị na-ezigara ha ma ọ bụ ịzụta ọrụ gị, jiri asụsụ a kapịrị ọnụ nwere nkọwa zuru oke na nkwukọrịta ọ bụla. Ahapụla ajụjụ ọ bụla gbasara ihe ị chọrọ ime. Atụla egwu ịkọwapụta oke. Dị ka mmekọrịta mmekọrịta ọ bụla ghere oghe, nkwukọrịta ụzọ abụọ bụ isi ihe ga-aga nke ọma. Ma obu uzo abuo. Yabụ, na mgbanwe ị ga-agwarịrị onye debanyere aha ihe ị ga-eme (ma ọ bụ na ị gaghị eme) iji zụlite ma ọ bụ nwee mmekọrịta mmekọrịta.
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi atụ anya atụmatụ, ka ọdịbendị ụlọ ọrụ gị bụrụ onye ndu gị. Mana nke a bụ ihe atụ nke email nkwenye nke ọ nwere ike bụrụ na onye ọrụ afọ gara aga, onye edemede nnukwu ederede Gary Halbert
Isiokwu / isiokwu: In banyela! Ugbu a gịnị?
Isi ọdịnaya: Ndewo Sue. Omenala ngosi nke rịọrọ dị njikere ma na-eche gị Ebe a. Ozugbo ị gara (http://exampleurl.com/sue) anyị ga-ajụ ma ị chọrọ ịnwale ọlaọcha, ọla edo, ma ọ bụ platinum plan. Họrọ platinum; ọ bụ n'ezie uru kachasị mma. Demo ga-ewe naanị ọkara awa mana ị ga-enwe ike ịme mkpebi ịzụta n'ụzọ ahụ n'oge ahụ.
Ọ bụrụ n’ebughị ụzọ lelee ya gị ahaziri ngosi taa, anyị ga-anwa ịbugharị kwa izu abụọ ọ bụla site na ụbọchị a, belụsọ na ịgwa anyị otu ọzọ Yabụ, gịnị ka ị na-ekwu? Oge adighi ka ugbua?pịa ebe a.
Maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa usoro a yiri ka ọ bụ ntakịrị karịa (ikekwe n'ihi na ha maara ngwaahịa na usoro ha nke ọma) mana maka onye na-edebanye aha gị n'ọrụ (n'ihi na ị na-arịọ ha ka ha jiri ego ha na / ma ọ bụ oge ha), ọkwa a zuru ezu. emepụta nghọta dị mma na oku doro anya iji mee ihe.
N'aka ozo, oburu na ichoro imeputa uzo ahia ihe omuma nke oma igha aghaghi ichota ihe ndi mmadu gha acho. Buru ụzọ kpebie ihe ị ga-eme; rụọ naanị omume ndị ahụ. Kpebie ihe ị chọrọ ka onye debanyere aha mee; gwa ha ka ha mee ihe ahụ. Kwuo ya n'ụzọ doro anya, n'ụzọ dị nkenke na n'agha.
Tags: email debanyere ahandenye aha emailịdenye aha
Septemba 29, 2009 na 6:13 ehihie
Nke a dị ezigbo mma, echekwara m ya maka ntụnye aka.